स्थिर सरकारका लागि मतदान
पहिलो चरणको मतदानको क्रममा गोरखाबाट एउटा खबर आयो । खबर थियो, गोरखा–२ मा जनताले स्थिर सरकारको लागि बामपन्थीहरुलाई मतदान गरे । बामपन्थी पहिचान छोडन नचाहेको एउटा कारण थियो भने अर्को कारण डा. बाबुराम भट्टराइलाई मत दिंदा उनी एक्लै हुने र केही गर्न नसक्ने फेरि स्थिर सरकारमा पनि योगदान दिन नसक्ने निष्कर्षपछि यस्तो भएको हो । गोरखाको यो सन्देश देशैभरका लागि पनि हो । अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि धेरैतिर देखिन्छ, आफू आस्थावान् भएको दललाई भोट दिनुस्, त्यो नभए अन्य दुई दल रोज्नुस् । अर्थात् ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीलाई भोट दिनुस् भनेर छ्यासछ्यास्ती पोष्ट भएको देखिन्छ । यसमा अपवाद विवेकशील साझाका रविन्द्र मिश्रमात्र देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा त उनको कब्जाजस्तै छ । उनको राजनीति नै सामाजिक सञ्जालमा टिकेको छ । सामािजक सञ्जालमा जिते रविन्द्रले भनेर हुइँया मच्चाइएको छ । सम्भवतः उनको अवस्था रञ्जु दर्शनाको जस्तै हुनेछ । बाँकी आउँछ, ठूला दललाई मत दिनुस् भन्ने आह्वान ।
देशभरको प्रतिस्पर्धा हेर्दा लाग्छ, प्युठानमा राजमो, भक्तपुरमा नेमकिपा र झापा–३ मा राप्रपाबाहेक कहिं कतै झुक्किएर एक सिटेले जिते भने बेग्लै कुरा हो । नत्र भने मधेस क्षेत्रबाहेक कहिं पनि तीन दलबाहेक अरुले जित्ने छैनन् । मत सीमित हुनेछ मात्र तीन दलमा । तीन दलबाहेक संघीय समाजवादी फोरम, राजपा, नेमकिपा, राप्रपा र राजमोबाहेकको प्रत्यक्ष सिट यसपालीलाई त्यस्तै हो, अर्को निर्वाचन पर्खौ भन्नेहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् । समानुपातिकको थ्रेस होल्ड पनि यिनै दलहरुभन्दा शायदै बाहिर जाला । कमल थापाको अवसरवादी राजनीतिको कारण गिर्दो राप्रपाको जनमत, यता र उता हुँदा पशुपतिशम्सेर राणाको शक्ति पहिचानमा समस्या र विवेकशीलको सामाजिक सञ्जालको हुइँयाले केही कमाल ग¥यो भने बेग्लै कुरा हो । नत्र भने राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाउने दल आधा दर्जन नाघ्ने छैन ।
अहिले जनतामा मतदान गर्ने स्थिर सरकारका लागि हो भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ । नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो रोग र विकृत पक्ष नै हो, अस्थिर सरकार । म्यादी सरकारकै जस्तो समय किटान गरेर थोरै समयको लागि प्रधानमन्त्री बन्न नेताहरु लालयित हुन्थे । आलोपालो प्रणालीबाट जनता वाक्क थिए । तीन दलकै कारण सरकार अस्थिर बनेको अर्को सत्य हो । अर्थात् साना र मधेसवादी दललाई कारण देखाएर ठूला दलले नै सरकारलाई अस्थिर बनाएका थिए । तर यसपटक जनतामा जाँदा दलहरुले मोर्चा बनाएका छन् र स्थिर सरकारको नारा दिएका छन् । अझ बामपन्थी दलहरुले त एकता गर्ने भनेरै मत मागिरहेका छन् । एकता हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो भविष्यको कुरा हो । भविष्यकै कुरा भए पनि गठबन्धन भने टुट्ने देखिंदैन । गठबन्धन नटुटेपछि स्थिर सरकार बन्ने नै छ । चुनाव अघिको वाचा कार्यान्वयन भयो भने, पहिलो सरकार नै बहुमतको बामपन्थी सरकार बन्नेछ ।
कतिपय सवालमा विकृत नै भए पनि लामो लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यास गरेको भारतमा दशकौंदेखि मोर्चाबन्दी भएको छ । संघीयतामा गइसकेपछि क्षेत्रीय दलहरुको उपस्थितिले यदाकदाबाहेक एउटै दलको मात्र बहुमत आएको देखिंदैन । तर सरकार भने यदाकदाबाहेक सधैं स्थिर नै हुने गरेको छ । मोर्चाबन्दीकै कारण यो सम्भव भएको हो । नेपालमा सुरु भएको मोर्चाबन्दी पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा रुप हो । जनताको चाहनाअनुसार स्थिर सरकारका लागि भएको मोर्चावन्दीप्रति जनताको आकर्षण देखिन्छ । मधेसका केही क्षेत्रहरुबाहेक देशैभरमा दुईपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ । समाचारदेखि सबैतिर दुईपक्षीय प्रतिस्पर्धाकै चर्चा छ । मधेस क्षेत्रबाहेक देश दुई मोर्चामा बाँडिएको छ । राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुलाई निर्वाचनमा जिताउन नै सही, मोर्चाबन्दीले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । जनता भने जसले जिते र हारे पनि स्थिर सरकार होस् भन्ने पक्षमा छन् । यस पटकको निर्वाचनले पक्कै पनि त्यो बाटो कोर्नेछ, सबै आशावादी होऔं । तर नेताहरु यिनै हुन्, विश्वासमा नपरौं, बरु स्थिर सरकारका लागि निरन्तर दवाब दिऔं ।